E-News Nepali || Fast and Accuracy » इजरायल र दुबईमा ब:मबा:री गर्ने इरानको ध:म्की, इरानले कैयौं ल:डाकू विमान परिचालन गर्दै आकासमा उडायो !
इजरायल र दुबईमा ब:मबा:री गर्ने इरानको ध:म्की, इरानले कैयौं ल:डाकू विमान परिचालन गर्दै आकासमा उडायो !
इराकस्थित सैन्य शिविरमाथि इरानले मिसाइल आ’क्रमण गरेपछि अमेरिकाले ह्वाइट हाउसको सुरक्षा बढाएको छ। राष्ट्रपति भवन वरपर साविकभन्दा निकै ठूलो संख्यामा युएस सेक्रेट सर्भिसका अधिकारी खटिएका छन्। कैयौं चेकजाँच पोष्टहरु खडा गरिएको र त्यहाँ एसल्ट राइ’फ’लसहित सि’क्रेट सर्भिसका अधिकारीहरु खटाइएको सीएनएनले जनाएको छ। उता इरानले आफ्नो भूमीमा एउटै ब’म खसालेमा दुबई, संयुक्त अरब एमिरेट्स (युएई), इजरायलमा व्यापक आ’क्रमण गर्ने चे’तावनी दिएको छ।
इस्लामिक रिभोल्युस्‍नरी गार्ड कर्प्सले इराकस्थित अमेरिकी सैन्यवेसमा गरिएको मि’सा’इल ह’म’लाका विरुद्ध अमेरिकाले जवाफ दिए त्यहीँ छि’रेर ह’मला गरिने चेतावनी समेत दिएको छ। यस अनुमानमाझ इरानले भने आफूवि’ रुद्ध अमेरिकाले कुनै पनि जवाफी कदम उठाएमा इजरायल र संयुक्त अरब इमिरेटको दुबईमा ब’ मबारी गर्ने चे’ तावनी दिएको छ ।
इजरायल र संयुक्त अरब इमिरेट मध्यपूर्व क्षेत्रमा अमेरिकाको नजिकका मित्र श क्ति हुन् । इरानी सै’न्य द स्ता रिभो लु सनरी गार्डले एक चे’ तावनीपूर्ण वक्तव्यमा आफूमाथि आ’ क्रमण भए अमेरिका र उसका क्षेत्रीय मित्रश क्तिले पछुताउनु पर्ने ध’म्की दिएको छ । उसको चे’ तावनीयुक्त वक्तव्य इरानको सरकारी समाचार एजेन्सी आईआरएनएले सार्वजनिक गरेको हो । ‘अमेरिकाको आ’ तंकवादी सेनालाई आधार दिएका अमेरिकाका मित्रशक्तिहरु कुनैको भूमिबाट पनि इरानवि’ रुद्ध आ’ क्रामक कदम उठाइएमा इरानले तिनमाथि आ क्रमण गर्नेछ रिभो लुसनरी गार्डको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
रिभोलु सनरी गार्डको टेलिभिजन च्यानलले पनि संयुक्त अरब इमिरेटको दुबई र इजरायलको हइ फामाथि ब’ मबारी हुने ध’ म्की दिएको छ । मि साइल आ’ क्रमणपछि इरानले कैयौं लडाकू विमान परिचालन गरेर आफ्नो हवाई आकास निगरानी गरिरहेको छ ।
प्रकाशित मिति २३ पुष २०७६, बुधबार १४:५०